နံမည် ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
မမိုးချို ရဲ့ စာရေးချင်တဲ့ အင်ဂျင်ကိုမနိုးနိုးအောင်ဝိုင်းဝန်း
မချိုသင်း- ( အမ သူငယ်ချင်းတချို့ အဲလိုခေါ်တာ ကြားဖူးလို့)း)
မိညိုဖြစ်ဖြစ်..မိလုံးဖြစ်ဖြစ်.. အမ လေးတော့..အမလေးပဲ။ အဟဲ..
မွေးနေ့ဆုမွန်နဲ့..ကွန်မန့်အတွက်..အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာတွေ နေ့တိုင်းရေးနိုင်ပါစေ လို့..ပြန်ဆုမွန်ပြုပါတယ်။
မ ရေ… မရဲ့စာတွေ မဖတ်ရတာကြာလို့ လွမ်းနေတာ… ခုတော့blogကြီးတခုလုံးရှိနေလို့ စိတ်မပူတော့ဘူး… ဂေါက်နဲ့ နှိုးတဲ့ မိသားစုအကြောင်းလေးတွေလဲ ဖတ်ချင်ပါတယ်… အင်ဂျင်ကြီးမပျင်းတောင် ဆက်ရေးပေးနော်…
အဲလောက်နာမည် လှလှပိုင်ရှင်လေးကို ဘဒူတွေယဲတွ ၀က်ကလေး လို့ခေါ်ဂျဒါ..။
Let me share my memories with your dad. When my wife was pregnant, we met with Sayar at Ko Aung Din house one day( You were at s'pore). I asked Sayar to choose the name for my son. He and KAD talked that how to choose the names and He was writing so many names in his note book. Then he looked at me and shake his head. ( looked like try to check my ugly face and think :)haha
Finally, he said how about "AUNG SAN LIN"? or " How about LaMin).I was suprised and I have no words to him. And KAD agree "LaMin" too. So I chose "LaMin Lin" for my son.( other friends like that too). One sure thing that Sayar always love and admire "BoGyoke Aung San" and Daw Aung San Suu Kyi.
Rest In Peace. Sayar!
Keep it up.Cho thin
( one more thing, He remembered all our friends' names and some gossips from our G.Class :). Man.. Sayar is one of the greatest people in our time.)
ဟဲ့ ချိုဝဏ္ဏ လို့ ကိုယ့်ဖာသာ ယူတဲ့လူလဲ ရှိပါသေးတယ်နော်။
ဟုတ်တယ် နော်ချိုသင်းရေ...
အမ လာလည်တယ်.. လာဖတ်တယ်ဟေ့... ဘလော့လုပ်ဖြစ်တော့မှ စ ကားပြောဖြစ်တော့တယ်..
Why you tell secret name. Ha Ha Ha
Oh. If you want to know how we all call her at Shan Taung Oo Camp? Hollar me....:)
ဂေါက်ကြီးနဲ့ နှိုးနေတာကိုပဲ နေ့ တိုင်းလာလာကြည့်ပြီး အားပေးနေပါတယ်။ :)
This is Nang Thandar Aung,who is friends of Chaw Chaw, Ko Par, kaung Moe.:)
Anyway very nice to see all your post, keep it up.:)
ဂေါက်တံနဲ့ လှည့်နိုးပေလို့သာပဲ။ အင်ဂျင်သာ အရှိန်ရရင် တနေ့ကို ငါးပုဒ်လောက် တင်မလား မသိဘူး။ :D
အမြဲဖတ်စရာ ဘလော့တခု တိုးလာလို့ ၀မ်းသာရပါတယ်
ကံ့ကံ့ ကလေ ... ကော်ကော်ကလေ လို့ရေးထားတာလေး ဖတ်ပြီး ရယ်မိတယ် :D
ဂေါက်နဲ့နှိုးလို့မရရင် ကုန်းပေါ်ကနေ လှိမ့်ချရမှာပဲ… :D
ကြည့်ရတာ စက်ကသေချာပေါက်နိုးနေပြီပဲ… ဆီလာဖြည့်ဖို့ ဆီပုံး လေးလုပ်ပါဦး…
ကဗျာဆရာ ဦးမိုး ရဲ့ သမီး လေး မချိုသင်း ရေ... နာမည်ပေးကင်းပွန်းတတ် မှာ လာ စား သွား တယ် ဗျ။ ဘာ မှ မကျွေးလို့ ကိုယ် ထမင်းချိုင့် နဲ့ ကိုယ် ဖွင့်စား သွား တယ်ဗျ။ မိချို နဲ့မိသင်းတို့နေ ကောင်းကျန်းမာပါစေ လို့ ဆန္ဒ ပြုလျက်... ခင်မင်လေးစားသော....